Aba bayili be-4 kwi-Instagram baya kukunika bonke ubuchule obunokubakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Abadlali, I intanethi
I-Instagram yenye yezona mithombo zikhulu zokuphefumlelwa namhlanje Kwaye aba baqulunqi be-4 baya kukunceda ukuba ufumane ukutya okuyilayo kwemihla ngemihla ukuze ugcwalise ezo zimvo sizikhangelelayo imisebenzi kunye nokunye.
Bayili aba-4 esinako dityaniswa ngokudibeneyo kwaye loo nto iya kukoyikisa ukwenza unobumba, jonga izimvo eziphambeneyo okanye loo mibala eqaqambileyo onokugcwalisa ngayo iindawo ezithile zokuhombisa.
2 Uyilo lweLad
3 UGianluca Alla
4 ULeta Sobierajski
Umyili ogxininisayo unobumba okumgangatho ophezulu kwaye esinokuthi ngayo mihla le sikhangele ukukhuthazwa okuyimfuneko kuyilo lwethu. Ukuqwalaselwa kweevidiyo zakhe ngesandla apho asifundisa khona ubugcisa bokubhala ngesandla ukuze senze ngaphezulu komsebenzi ogqwesileyo.
Umzobi Umlawuli we-3D kunye nopopayi ovela kwiakhawunti yakhe ye-Instagram Kusibeka phambi kwale mizobo yasezidolophini egcwele umbala kunye nobomi ukukhupha elona cala lingenangqondo. Akukude emva kwimixholo yayo kwaye iyakwazi ukunika ukujikajika kumlawuli omdala weNintendo.
IGianluca isebenza ngokungafaniyo kwezi zimbini zangaphambili ukulungisa imisebenzi yobugcisa ebonakaliswa ukusetyenziswa komnyama uninzi lwazo, nangona olu bomvu kunye neminye imibala ephambili engqongqo nayo isilela. Udlala kakhulu ngejiyometri kunye nokuchwetheza yenye yezinto azithandayo njengoko ubona kwiprofayile yakhe ye-Instagram.
Ekugqibeleni sahlala nomculi uLeta Sobierajski kunye umhlaba wakhe ugcwele imibala kunye nendalo engenantlonelo kuzo zonke iintlobo. Udlala kakhulu ngefashoni kwaye iimpahla zakhe zokunxiba, zibubudenge, akoyiki ukubonisa ilizwe lakhe ukuba lisihlasele ngobuhlanya bakhe kunye nobuchule bokuyila. Akufanele uphoswe kukuqeshwa kwemihla ngemihla kwezithuba zabo kwi-Instagram kwaye ngenxa yoko ube manzi ngobuchule babo bendalo. Ungaphoswa ezi webhusayithi ukufumana inkuthazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 4 abayili be-Instagram ukuba balandele inkuthazo
Rekhoda isikrini sakho sekhompyuter ngeRekhodi ebonakalayo.io kwiwebhusayithi yabo